Dhul gariir dhimasho sababay oo ku dhuftay Japan - BBC News Somali
Dhul gariir dhimasho sababay oo ku dhuftay Japan
Xigashada Sawirka, EPA/JIJI PRESS
Jaziiradda ku taalla waqooyiga dalka Japan ee Hokkaido ayaa waxaa ku dhuftay dhul gariir awood badan iyadoo meelaha qaarna uu dhulka go'ay, taasoo ay guryo badan ku burbureen.
Ugu yaraan siddeed ruux ayaa ku geeriyootay halka 40 qof oo kalena la la'yahay, sida ay soo tabiyeen warbaahinta maxalliga ah.
Dhul gariirkan oo uu cabirkiisu ahaa 6.7 magnitude ayaa sidoo kale sababay inuu adeeggii korontada ka go'o ku dhawaad saddex milyan oo guri ka dib markii uu gooyay qalab korontada qeybiya.
Musiibadaan ayaa timid xilli ay maalmihii la soo dhaafay duufaan qasaare dhimasho sababtay ku dhufatay galbeedka dalka Japan.
Duufaantaas oo lagu magacaabo Jebi, oo ahayd tii ugu xoogga badneyd ee Japan soo marta 25 sano gudohood ayaa dishay ugu yaraan 10 ruux waxaana ay sababtay bur bur baaxad leh.
Dhul gariirka dhacay aroornimadii hore ee saaka ayaa ruxay dhul ku fadhiya 62km (39 miles) oo ku yaalla dhinaca koonfurta-bari ee caasimad goboleedka Sapporo.
Masuuliyiinta saadaasha hawada ayaa sheegay in aysan jirin khatar musiibo tsunami ah oo laga cabsi qabo.
Warshad sameysa nuclear-ka oo aan hadda shaqeynin ayaa lagu qasbanaaday in laga damiyo awoodda tamarta keydka ah ee ay isticmaaleysay.
Dhul gariir ku dhiftay bartamaha Talyaaniga
Dhul gariir ka dhacay El Salvador
Dhul gariir xooggan oo ku dhuftay jasiirad ku taalla Indonesia
Indonesia oo uu ka dhacay dhul-gariir aad u xooggan
Mahiigaanno dad ku laayey Japan
Dadka deegaanka iyo socotada ku sugan gobolkaas ayaa baraha xiriirka bulshada ku shaaciyay sida ay uga argagaxeen dhul gariirkaasi.
Waxay sidoo kale soo bandhigeen sawirro muujinaya safaf dhaadheer oo loogu jiro bakhaarrada raashinka, maadaama ay dadku doonayaan iney guryaha cunto ku keydsaaan iygoo ka cabsi qaba iney dhici karaan dhul gariirro kale.
Xigashada Sawirka, KYODO/VIA REUTERS
Saraakiisha cilmiga hawada ayaa ka digay iney dhici karto gil gilasho daba socota dhul gariirka weyn waxayna dadka ku boorriyeen iney feejignaadaan.
"Dhul gariirrada waaweyn way laba-dhacaan inta badan, gaar ahaan labo ilaa saddex maalmood gudahood," Toshiyuki Matsumori oo ka tirsan waaxda saadaasha hawada ayaa sidaas yiri, sida ay soo xigatay wakaaladda wararka ee AFP.
"Waxaan ku boorrineynaa shacabka iney aad u taxa daraan oo aysan aadin meelaha khatarta ah." Ayuu yiri.
Japan ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan dhul gariirrada ugu badan ee caalamka, waxaana dalkaas kaligiis ku dhufta 20% ka mid ah dhul garirrada uu cabirkoodu yahay 6.0 magnitude ama uuba ka sarreeyo.